Wasiirka Amniga oo sheegay in gacanta lagu dhigay Shabakado dalka ka dhoofi rabay | Baydhabo Online
Wasiirka Amniga oo sheegay in gacanta lagu dhigay Shabakado dalka ka dhoofi rabay
Wasiirka Amniga Gudaha Somaliya C/risaaq Cumar Maxamed oo ka hadlaayay kulan looga hadlaayay tahriibka, ayaa wuxuu sheegay in Dowladda Somaliya ay gacanta ku dhigtay shabakado doonaayay inay si sharcidaro ah uga dhoofaan Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay in arintaan ay fududeysay nidaamka Garoonka Aadan Cadde oo la adkeeyay, markii la baaray Documentiyada ay ku dhoofayeen dadkaasina ay cadaatay inay been abuurt yihiin.
Wasiir C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa qeexay dadkaasi inay gaarayeen ilaa labaatameeyo ruux oo rabay inay si aanan sharci aheyn dalka uga dhoofaan.
“Runtii waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo Shabakadaha dhowr marna waa la qabtay markii ugu dambeysana dhawaan ayaa la qabtay oo labaatameeyo ka dhoofaayay Garoonka Diyaaradaha ayaa laga qabtay, waxaana sahlay nidaamka Garoonka ka jira oo Datada la geliya, Baasaboorka ama fiisaha wuxuu sheegay inay ahaayeen wax la soo sameeyay oo aanan sax aheyn, dhinaca Garoomada kale ee Maamul Goboledyada iyaga howshaasi la mid ah ayeey qabteen.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga Somaliya
Wasiirka Amniga Somaliya ayaa sidoo kale tilmaamay Dowladda inay la dagaalamayso Shabakadaha dalka wax ka tahriibaya ee doonaya inay si aanan sharci aheyn dadka ku dhoofiyaan.
Wixii ka dambeeyay Qaraxi ka dhex dhacay Diyaarada Daallo, waxaa si weyn loo adkeeyay nidaamka Baarista iyo System-ka kala duwan ee Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Marka Garoonka la gelaayo, ayaa waxaa loo maraa nidaam adag oo Baaritaan iyo hubin fara badan la xiriirta.